दिबेश पोखरेल अमेरिकन आइडलमा उप बिजेता बने - Enepalese.com
दिबेश पोखरेल अमेरिकन आइडलमा उप बिजेता बने
विजय थापा २०७७ जेठ ५ गते १:५६ मा प्रकाशित
डिसी । नेपाली मूलका दिबेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको १८ औ संस्करणमा ५ औ स्थान हुँदै दोश्रो स्थानमा पुगेता पुगे पनि अमेरिकन आइडल २०२० को बिजेता भने हुन् नसकेता पनि नेपाली र नेपालको नाम राखे ।
अमेरिकन आइडल २०२० को बिजेता जस्ट साम भईन भने दिबेश पोखरेल दोश्रो स्थानमा पुग्न सफल भए । उनले बिदेशीलाई अझ नेपालको बारेमा चिनाए ।
दिबेश अर्थात् अर्थर गन उत्कृष्ट ७ औ मा पर्न सफल भएका थिए । अन्तिम निर्णायक समारोहमा ७ औ प्रतियोगी मध्ये उनि उप बिजेतामा पर्न सफल भएता पनि अमेरिकन आईडल २०२० को बिजेता भने बन्न सकेनन ।
पोखरेलको अद्वितिय स्वर भएता पनि मतदानको कारण दर्शकले अन्य प्रतियोगीलाई ज्यादा मन पराएको हुनाले उप बिजेतामा चित्त बुझाउनु पर्यो ।
७ जना मध्ये दुई जना तुरुन्तै बाहिरिएका थिए भने दिबेश पोखरेल(अर्थर गन) ५ औ स्थान सम्म टिकेका थिए । र,अन्तिममा उनि दोश्रो स्थानमा रहन सफल भए ।
ARTHUR GUNN Sings “Have You Ever Seen The Rain” by CCR – American Idol 2020 Finale
#NowOnAmericanIdol 🎶 Arthur Gunn givesasoulful rendition of classic and we're AMAZED! Will he become #TheNextIdol?
Posted by American Idol on Sunday, 17 May 2020
अमेरिकाको ईतिहासमा पहिलो पटक नेपाली मूलका दिबेशले सुनौलो अक्षरमा आफ्नो नाम लेखाएका छन् । उनले दोश्रो पुस्तालाई बाटो खोली दिएका छन् ।
यहाँ सम्म पुग्नु नै सम्पूर्ण नेपाली समुदायको लागि अमेरिकन आइडल बिजेता सरह हो । त्यो भन्दा दिबेशको प्रस्तुति कुनै कमजोरी रहेनन् । उनि सबैका प्रेरणाका श्रोत भएका छन् ।
सबैका प्रिय भएका छन् । लाखौ लाख प्रशंसक बनाउन सफल भए ।
अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीले उनलाई जिताउन हर सम्भव प्रयास गरे । तर पनि ३० करोड जन जनसंख्या भएको राष्ट्रमा नेपाली समुदायको संख्या ३ लाख हाराहारीमा रहेता पनि सबै एक जुट भै दिबेश पोखरेललाई अमेरिकन आइडलको ताज लगाएको हेर्न चाहन्थे ।
अमेरिकामा नयाँ पुस्ता र बिसेष गरि दोश्रो पुस्ताले उनिबाट थुप्रै कुराहरु सिक्न सक्नु पर्छ । अमेरिका आएको केवल ५ बर्ष भित्र नै अमेरिकन आइडलमा सहभागी हुन् पाउने पोखरेल भाग्यशाली हुन् र उनि भित्र निहित प्रतिभाको कारण यहाँ सम्म उनले यात्रा गर्न सके ।
अमेरिकन आइडल २०२० को १८ औ संस्करणमा ७ औ प्रतियोगिहरुमा डिलोन जेम्स,अर्थर गन( दिबेश पोखरेल) फ्रान्सिस्को मार्टिन,जोनी वेस्ट,जुलिया गारगानो ,लुइस नाईट तथा जस्ट साम रहेका थिए ।
तर ५ औ स्थानमा डिलोन जेम्स,अर्थर गन( दिबेश पोखरेल),फ्रान्सिस्को मार्टिन,जोनी वेस्ट र जस्ट साम परेका थिए ।
कोरोना भाइरसको कारण सबै कलाकारहरुले घरबाटै प्रस्तुती गरेका थिए । ५ जनाले दुई / दुई वटा गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।
लामो समय देखि अमेरिकन आइडलका कार्यक्रम प्रस्तोता रहेका रायन सिक्रेस्टले कार्यक्रम संचालन गरेता पनि उनलाई निर्णायक ल्युक ब्रायन,केटि पेरी र लोयोन रिचीले साथ दिएका थिए ।
INSANE! Arthur Gunn Delivers STAR Power During A Gavin DeGraw Hit – American Idol 2020
#NowOnAmericanIdol 🎶Who else is ROCKIN' out in their living room to this Arthur Gunn performance?